Publié mars 25, 2020 par Book News
Nandritra izay herinandro maromaro izay dia somary voakorontana ny andavanandron’ny tsirairay. Ny antony dia noho ny « Coronavirus ». Raha hiresaka momba azy io aho dia aleoko mampiasa ny hoe COVID-19 satria ilay anarany toa tena vao mainka mahatonga azy mampihorohoro kokoa. Ary mahagaga fa na ny zaza aza matahotra raha vao tononina fotsiny io anarana io..
Tokony tsy hivoaboaka ny trano isika amin’izao fotoana izao raha ny tokony ho izy. Misy ireo tsy mandeha miasa intsony, misy kosa anefa ireo izay tsy maintsy mandeha an-tongotra mamonjy ny asany noho ny tsy fisian’ny fiara fitaterana. Misy ireo manangona sakafo mba hitsinjovana ny fijanonana an-tokantrano. Kanefa indrisy misy ireo mitady ny hohanina androany amin’ny asa hita androany, ka tsy manam-bola hividianana na dia vary iray gony aza. Eo anatrehan’izany fifamahofahoan-javatra izany, afaka miezaka ny tsy hivalaketraka sy tsy ho feno tahotra ve isika ?
Filaharana teny amin’ny fivarotam-panafody tao aorian’ny filazana trangana Covid-19 voalohany teto Madagasikara cc: Sary tahiry
‘Ndeha tsy hamorona ady hevitra tsy misy fotony ary tsy hikoropaka
Nanomboka tamin’ny fotoana nilazana tamin’ny fomba ofisialy ny fisian’ny tranga COVID-19 teto amintsika dia tahaka ireny hoe ho avy ireny ny farandro. Nikoropaka sy nitaintaina mafy avokoa ny rehetra. Ny zava-nisy dia tena nanamarina ny nolazaina mpampianatra iray tamiko hoe:
« Raha tonga eto Madagasikara ny COVID-19 dia tsy ny aretina loatra no ahiana hahafaty ny olona fa ny fikoropahan’ny rehetra hiatrika azy. »
Izay tokoa no nitranga nandritra izay andro maromaro izay. Teo ny tahotra, teo ny fitaintainana izay mbola niampy ady hevitra maro ihany koa. Isika Malagasy dia milaza fa ny zavatra efa vita tsy azo hiverenana intsony, kanefa maninona no mbola maro no mibanjina ny lasa? Fotoana izao tokony hitadiavana vahaolana miaraka fa tsy hifanomezan-tsiny intsony.
Anisany fiarovana amin’ny fiparitahan’ny Coronavirus ny arovava. cc: Pixabay
Tsy misy vahaolana mahomby fa mila manaja fandaminana
Tsy mbola nahitana fanefitra hatreto ny COVID-19 kanefa mila marihina fa ny taham-pahafatesana dia 2% hatramin’ny 7%. Fanampin’izany, tsy mbola nisy olona maty raha ny eto amintsika hatreto. Kanefa isika ihany no mieritreritra ny ratsy hitranga raha mino ireo vaovao rehetra voalaza na dia tsy ireo vaovao ofisialy aza.
Ndeha isika hiezaka ny hanaraka ireo fandaminana izay afaka hanavotra antsika. Ny vahaolana hita aloha dia ny mijanona ao an-tokantrano, koa ndeha hiezaka hanao izany. Ho an’ireo izay miasa kosa anefa dia angatahina manokana ny Fanjakana sy ireo Mpampiasa azy hanome vahaolana ho azy ireny. Mizara vary, menaka, … ho an’ny mpiasa ianareo rehefa fety, izao indrindra anefa no tena ilàna ireny entana ilaina andavanandro « PPN » ireny.
Ndeha hanao ny fomba rehetra isika hanajana ireo toromarika. Fifehezana sy fanajana lamina no ilaina, dia ho voafehy ao anatin’ny 15 andro tokoa ny COVID-19.